musha > Reseller
Tsvaga mutengesi padyo newe:
Batana nemabhizinesi emuno anopa uye kutsigira DataNumen zvigadzirwa. Nyanzvi yekudzidzisa uye yekubatanidza masevhisi kubva a DataNumen reseller ichakubatsira iwe kuzadzisa yakanyanya kudzoka pane yako investa:
zvepasi rose SHI International Corp Foni: + 1-888-764-8888
Kero: SHI Kumusoro
zvepasi rose SoftwareONE Foni: + 41 44 832 41 69
Address: SoftwareONE AG | Corporate Headquarter
zvepasi rose COMPAREX AG Kero: Leipzig, Germany
zvepasi rose CACI International Inc Kero: Arlington County, Virginia, USA
zvepasi rose Insight Enterprises Foni: + 1-800-467-4448
Kero: Insight yepasi rose dzimbahwe
zvepasi rose Synnex Corporation Main Runhare: + 1-510-656-3333
Main Fax: + 1-510-668-3777
Kutengesa: + 1-800-756-9888
Kero: Corporate Headquarter
Jerimani CCP Software GmbH Phone: + 49 6421 1701-0
Address: CCP Software GmbH
Kero: Nha. 14, Balaji Chambers
2ndFloor, 10th Main Road
India AB&D Software India Pvt. Ltd. Mutsara: + 91-080-4111 5871
Kero: AB & D Software India Pvt Ltd.
# 2079, C Chivharirwa, Kodegehalli,
Bhuruneyi Cogito Solutions Ltd. Foni: + 852-23976665
Kero: Chikamu B, 13 / F., Winsan Tower,
Kero: Kamuri 1105, C2, Hao Bai Da Sha,
Kwete 50 Xisanhuan North Road, Ruwa rweHaidian,
Uzebhekisitani Softline Group Runhare / Fax: +7 (495) 232-00-23
Iyo Commonwealth yeRusununguko Nyika (CIS) & & Baltic nyika Pba Consult LLC Pba Consult LLC
Runhare: +7 495 797-89-97
Rashiya Syssoft, LLC Runhare: +7 (495) 646-14-71 ext. 113
Pohodniy proezd 4/1, yabviswa. 111,
Moscow 125373, Rashiya
Rashiya Softmap, LLC Softmap, LLC
Runhare: +7 (495) 627-69-00
Foni: + 84903408066
kuva DataNumen mutengesi:
DataNumen inopa mukana wevatengesi kuti vawedzere imwe mari nekujoinha iyo DataNumen Reseller Partner Chirongwa. Maitiro ari nyore ekunyoresa anotendera iwe kuti uve chikamu chehukuru hwepasirese uye most kubudirira data kudzoreredza chigadzirwa mutengesi chirongwa.
Tinogamuchira chero munhu, kusanganisira vatengesi-vanowedzera kukosha, vanobatanidza masisitimu uye vanachipangamazano vanotengesa masevhisi uye / kana vanozadza software kana Hardware kune vanozopedzisira vashandisa, kana makambani anoita zvigadzirwa zvekutengesa uye kushambadzira kuburikidza nezvitoro zvekutengesa, software zvitoro, zvitoro zvemakomputa, dhipatimendi zvitoro, masupamaketi, zvichingodaro.
DataNumen purogiramu yekutengesa ndiyo yakanakisa. Sei?
Discount yakakwira se65%, yakawedzera nekuita kwako.
Kune mutengesi mutsva, tinopa 10% dhisikaundi pakarepo. Uye ukangotengesa marezenisi anodarika mashanu echinhu chero chipi zvacho mune mumwe mwedzi, unowana zvirinani 20% dhisikaundi kune chero kutenga mumwedzi unotevera. Uye iwe unogona kuwana yakawanda kuderedzwa nekutengesa zvimwe, seinotevera:
Kana iwe watengesa kupfuura 5 marezinesi mune mumwe mwedzi, isu tinokupa iwe 20% dhisikaundi mumwedzi unotevera!
Kana kupfuura 10 marezinesi, kudzikisira kuchave 25%!
Kana kupfuura 20 marezinesi, kudzikisira kuchave 28%!
Kana kupfuura 50 marezinesi, kudzikisira kuchave 35%!
Kana kupfuura 100 marezinesi, kudzikisira kuchave 50%!
Kana kupfuura 200 marezinesi, kudzikisira kuchave 65%!
Tengesa Zvakawanda uye Tora Zvakawanda! Start Izvozvi!
Ongorora: Kana yako yekutengesa ichidonha, ipapo mutengo wacho uchadzikira zvakare.
DataNumen zvigadzirwa zvinozivikanwa kwazvo.
Ndokusaka isu tichikupa iwe yakasimba vimbiso yepamusoro yekutengesa chikamu. Semutungamiri wepasi rese mumatekinoroji ekudzoreredza data, isu tatengesa yedu yekuhwina-kuhwina data kudzoreredza software munyika dzinopfuura zana nemakumi matatu. Vatengi vedu vanobva pakomputa novice kune vanehunyanzvi IT vanopa mazano uye vanopa data kudzoresa vanopa, kubva kumasangano madiki kuenda kumabhizimusi makuru kusanganisira fortune 130. Muchokwadi, wese mushandisi wemakomputa anogona kuve nechinodiwa chinodiwa pane edu ekudzosa data zvigadzirwa.
Yakazara ruzivo rwekutsigira.
Kuva wedu wekubatana, iwe unowana mukana kune wakakosha uye unobatsira ruzivo:
kutenga uye kurodha chiyero (chiyero chekushandura) kune zvese zvigadzirwa,
edu emangwana ekushambadzira zviito uye mitengo,
zvigadzirwa zvedu zvinotengesa zvakanyanya.
Kuita kuti zvikwanisike, isu tinoita yakakosha nhau posting kune vanobatana uye rutsigiro rakavharwa rakabatana chikamu nerakawanda ruzivo rwekushambadzira zvine chekuita nezve zvigadzirwa zvedu. Ichakubatsira iwe kusarudza zvigadzirwa zvakanakisa zvinotengeswa pane yako saiti, gonesa kushambadzira kwako, uye enzanisa kutengesa kwekuita.
Yakazara mapakeji ezve kusimudzira zvinhu.
Zvese zvekusimudzira-zvigadzirwa zvezvinhu zvese zvigadzirwa (senge rondedzero, kushambadzira uye kutaurirana zvinoreva, mireza, mibairo, ongororo, akanakisa maonero evatengi, kubvunzurudza nevagadziri uye zvimwe zvakawanda) zvinogara zviripo kune vatinoshanda navo. Unenge usina kupedza nguva yakawanda uchitsvaga chikwangwani kana pikicha yaunoda pane saiti.
Yakabatana kushambadzira mishandirapamwe uye kushambadzira zviito
Isu tinogona kuenderera takabatana mushambadziro wekushambadzira newe. Kune mitengo yakasarudzika yevatengesi, pamwe nezvakawanda mihoro, kutengesa zororo, tsamba dzakananga uye zvimwe zvakawanda. Iwe unogona kugara uchiita chikumbiro chekuwana zvekushambadzira zvemhando ipi neipi. Iwe unogona zvakare kutarisira komisheni muzana kuwedzera kana uchironga nhau posting, kushambadzira mishandirapamwe, uye kushambadzira zviito. Dzimwe nguva isu tinotopa chikamu chikamu zviito zvakadaro. Iwe une zano? Taura nesu!
Kutsigira nekukurumidza kunogara kuripo.
Chero mibvunzo, mazano uye zvikumbiro zvichafungidzirwa uye iwe unowana yepamusoro-soro mhinduro mune ipfupi nguva inogoneka. Ndokumbirawo, shandisa yedu fomu yekupindura kubvunza chero mubvunzo kana kukumbira zvine chekuita nechirongwa chedu chekutengesa.
Maitiro ekuita start
Yedu yekutengesa chirongwa inotarisirwa ne MyCommerce.com, mutungamiri wenyika pasoftware reseller zvirongwa. Iyi purogiramu iri nyore kwazvo. Iko hakuna chakavanzika costs uye ndizvo vakasununguka kuti isayine.
Dzvanya Pano Kunyoresa Reseller Chirongwa Zvino
Mushure mekunyora, tinokutumira email yekusimbisa ine ID yako yekutengesa. Yako reseller account ichave vanotenderwa nekukasira uye unogona kuishandisa kutenga zvigadzirwa zvedu izvozvi, seinotevera:
kushanya yedu webhusaiti uye tinya iyo MyCommerce odha yekubatanidza kune inoenderana chigadzirwa iwe chaunoda kutenga.
Mune iyo MyCommerce yekuraira fomu, mune "Kudzorera Mutengi / Mutengesi" chikamu, isa ID yako yemutengesi uye password kuti upinde. Ipapo unogona kutenga chigadzirwa. Iyo mutengesi ID inogona kuwanikwa mune yekunyoresa yekusimbisa email yatinotumira kwauri, uye password ndiyo yaunonyorera kana iwe uchinyoresa.
Pakutanga tinopa 10% dhisikaundi, uye ukangotengesa anopfuura mashanu marezinesi echinhu chero chipi zvacho mune mumwe mwedzi, uchawana zvimwe kuderedzwa yekutenga chero kupi mumwedzi unotevera.